Ny mason'i Hawk dia karazan-tsokosoko manga mikrokiroko manga - video
Tags Maso ozatra manga, Ny mason'i Hawk
Vidio ny mason-jaza voajanahary ao amin'ny fivarotanay
Vatosoa vatosoa manga mavo manga amin'ny karazan-kintana microcrystalline. Izy io dia mineraly miova ho lasa mineraly hafa rehefa mandeha ny fotoana. Crocidolite voalohany ary avy eo "namboarina" ho quartz. Crocidolite dia mineraly manga fibrous an'ny fianakavian'ny riebeckite silicates amphibole. Ny fiovan'ny vato dia manomboka rehefa lasa miorim-paka tsikelikely eo anelanelan'ny kofehin'ny crocidolite ny quartz.
Ity vatosoa ity dia malaza amin'ny resabe. Toa ohatran'ny hoho aza. Mifandraika amin'izany mason'ny tigra ary pietersite, samy maneho ny fomba firesaka mitovy aminy. Maso tigra namboarina similary izay misy votoaty vy avo kokoa.
Hetezana, fitsaboana ary fanontam-pirinty
Ny vatosoa volo manga dia matetika no tsy voatsabo na tsy hatsaraina amin'ny fomba rehetra.
Matetika no omena kobako ny mena mba hanehoana tsara ny fifandraisana aminy. Ny vato mena dia novolavolain'ny fitsaboana mangatsiaka. Ny vato matevina dia marefo amin'ny fanatsarana ny loko amin'ny fampiasana fitsaboana asidika azota.
Ny vera fibre optika artifisialy dia fanahafana ny mason'ny tigra, ary vokarina amin'ny loko maro karazana. Ny mason'ny tigra dia avy any Afrika atsimo sy atsinanan'i Azia.
Ny quartz microcrystalline dia fivondronan'ny kristaly quartz izay tsy hita afa-tsy eo amin'ny haben'ny haingam-pandeha. Ny karazan-tsokolokaretina dia samy translucent na tsy fahita firy, fa ny karazany mangarahara kosa dia macrocrystalline. Ny Chalcedony dia endrika silika misy krôtôrystalline izay misy ny intergrowth tsara amin'ny quartz sy ny moganite monoclinic polymorph. Ny karazana vatosoa misy vatosoa hafa, na ny vato mifangaro anisan'izany ny quartz, izay matetika ahitana ny fehikibo mifanohitra na ny lokon'ny loko. agata, carnelian na sard, beryla, heliotrope, ary jaspy.
Amin'ny nugget mahafinaritra, ity vato ity dia ekena ho vatosoa majika izay manamboatra efijery miaro manodidina ny fantsom-biby mba hiarovana amin'ny fandrahonana. Fantatra fa hanafika ny fanahy, mitondra fahalalana sy fahazavana ao an-tsaina izy mba hahitana ny zava-misy iainana.
Ny mason'i Hawk, avy any Afrika Atsimo
Ny mason'i Hawk ambanin'ny mikraoskaopy
Mampidi-doza ve ny mason'ny hena?
Ny antony mahatonga ny chatoyance dia azo asiana kofehy asbestos, ary koa fibre actinolite. Asbestos dia fitaovana fanta-daza ilaina nefa mampidi-doza ary mety hiteraka homamiadan'ny havokavoka, saingy ny kofehy mampidi-doza dia tafiditra ao anaty mason'ny volo manga sy ny mason'ny saka ary tsy atahorana ho an'ny tompony.
Voajanahary ve ny maso tigra manga?
Eny. Ny vatosoa dia ampahany manokana amin'ny fianakavian Quartz. Tsy toy ny mason'ny tigra mena, izay tena vokatry ny mason'ny tigra volamena, ny loko manga amin'ny mason'ny tigra dia trangan-javatra voajanahary.
We make custom made hawk’s eye stone jewelry as engagement rings, necklaces, stud earrings, bracelets, pendants… Please Mifandraisa aminay isaky ny teny.
20% Fihenam-bidy amin'ny tsangambato.
* azo alaina hatramin'ny 30 aprily 2021